An’aliny Ao ny Kroasia no Manameloka ny Tsy Fahombiazan’ny Governemanta Amin’ny Fanavaozana ny Sehatry ny Fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 6:24 GMT
Hetsi-panoherana tao Zagreb, Kroasia, ny 1 Jona 2017. Sary avy tamin'ny ONG Zelena Akcija (Hetsika Maitso), CC BY-NC.
Na teo aza ny orana ny 1 Jona 2017, maherin'ny 20.000 isa ireo mpanao fihetsiketsehana nanao diabe tao afovoan'i Zagreb, nangataka fanavaozana ny fanabeazana any Kroasia. Teo amin'ny 10.000 hafa koa nanao hetsi-panoherana tany amin'ireo tanàna lehibebe kokoa tany Split, Rijeka, Zadar, Poreč, Karlovac, Osijek ary Slavonski Brod.
Ireo dia hetsi-panoherana nokarakarain'ny GOOD Initiative (Fandraisana andraikitra TSARA), izay manohana ny fampidirana ny fitaizana ny olompirenena (Građanski odgoj i obrazovanje) ho anatin'ny rafi-pampianarana. Ahitana ireo fikambanana miisa 45 tsy miankina amin'ny fanjakana izay efa niaraka niasa nanomboka ny taona 2008, ilay fandraisana andraikitra.
Famerenana ilay famoriana goavana ny taona 2016 ilay hetsi-panoherana, fotoana nahitàna Kroaty 50.000 isa nangataka ny fampiharana ireo fanavaozana ara-panabeazana. Nasongadin'ny hetsi-panoherana tamin'ity taona ity ny tsy nahavitan'ny governemanta niatrika ireo fitakiana maika nataon'ireo olompirenena manao fihetsiketsehana.
Ankoatra ny fanitsiana ny fandaharam-pianarana, tafiditra ao anatin'ireo fangatahana hafa sasany amin'ity taona ity ny fanapariahana ny rafitry ny sekoly, amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ireo mpanabe amin'ny famolavolàna ny politikan'ny fanabeazana sy ny fametrahana torolàlana mazava ho an'ny asan'ireo mpampianatra.
Ny tena hafatra fototr'ireo hetsi-panoherana dia ny hametrahan'ireo manampahefana fanavaozana tsara tefy amin'ny fandaharam-pianarana mifototra amin'ny tolotr'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana, fa tsy miantehitra amin'ireo tolokevitr'ireo vondrona matanjaka mpiaradia, izay zara raha manana fahalalàna amin'ny fitantanana ireo sekoly.
Nitondra takelaka mivaky toy izao ireo mpanao hetsi-panoherana “Tsy nahomby tamin'ireo olompirenena ianareo,” “Ampy izay!” ary “Tombontsoam-bahoaka ny [resaka] Fanavaozana ny Fanabeazana!”
‘Tsy antsoina hoe fanavaozana ara-pinoana io fa fanavaozana ny fandaharam-pianarana’ #Croatia #hrvatskamozebolje #hrvatskamorabolje #politikaHR
Anjakan'ny antoko mpandàla ny nentindrazana afovoany-havanana, Fivondronan'ny Demokraty Kroaty (UDZ) , izay manana fifandraisana akaiky amin'ny Eglizy Katolika, ny governemanta Kroaty ankehitriny, izay tonga teo amin'ny fahefana ny Oktobra 2016.
Ny sasany amin'ireo mpanao hetsi-panoherana nitondra takelaka miampanga ny fananan'ny Eglizy Katolika dindo lehibe eo amin'ny rafi-panabeazam-bahoaka, toy ny “Tsy antsoina hoe fanavaozana ara-pinoana io, fa fanavaozana fandaharam-pianarana” sy “Opus Dei, Mialà Tany.”
Bitsika: #TsyMaintsyManaoTsaratsaraKokoaKroasia #SatriaKroasia #Osijek #reforms
Sary: “Tsy mila fitaizana sy fanabeazana patriarika izahay”; “Ataovy any amin'ny fianarana mamily fiara ny fampianarana ara-pivavahana”; “Ataovy any an-tsekoly ny fanabeazana ara-pananahana”.
Nanome tsiny ny faharatsian'ny toe-draharaha amin'ny sehatry ny fampianarana ihany koa ireo mpanao hetsi-panoherana, ho an'ireo fifindramonina faobe ataon'ireo manampahaizana any Kroasia. Ny sasany nitondra takelaka mivaky toy izao “Te-handeha eny amin'ny Volana izahay, fa tsy any Irlandy.” Nentina nilaza ny zava-misy ilay hoe Irlandy, satria maro ireo olona tonga tamin'ny fianarana ambony, indrindra ireo manampahaizana amin'ny lafiny informatika, nifindra monina nankany Irlandy.
Ny fametraham-pialan'ny minisitry ny fanabeazana sy ny siansa, izay tafiditra taminà tantara ratsina fakàna tàhaka, no iray amin'ireo fangatahana mazavan'ireo mpanao hetsi-panoherana. Efa nandà io fangatahana io sahady ny praiminisitra.
Mbola tsy nametra-pialana ihany ilay minisitra mpanao dika/petaka. #TsyMaintsyManaoTsaratsaraKokoaKroasia #AfakaManaoTsaratsaraKokoaKroasia
Nitaky ny fametraham-pialàn'i Dijana Vican ihany koa ireo mpanao hetsi-panoherana, izy io no manampahaizana lehiben'ny kaomisianan'ny fampiharana ny Tetikadin'ny Fanabeazana, Siansa ary Teknolojia.
Nampangain'ireo mpanao hetsi-panoherana ny tomponandraiki-panjakana ho tsy nahavita niaro ny rafi-panabeazana teo anatrehan'ireo vondrona mpiaradia amin'ny fitondrana ; ireo vondrona ireo izay nametraka politika fanavaozana lazaina fa mifanohitra amin'ireo fitsipiky ny lalàm-panorenana.
Nolavin'i Pavo Barišić, Minisitra Kroaty misahana ny Fampianarana sy ny Siansa,ny fiampangàna hoe ireo olona mpitàna ny nentindrazana no mameno ilay vondronà manampahaizana nofidian'ny fanjakana tokony hampiditra ireo fanavaozana any amin'ny sehatry ny fanabeazana. Nampiany fa nofidiana noho ny lazany ho manana fomba fangaharahàna ireo mpikambana ireo.
Nandritra ny andron'ilay hetsi-panoherana, nisy fandaharana resadresaka nataon'ny orinasa haino aman-jerim-bahoaka, Radioteleviziona Kroaty, nanasàna ireo manampahaizana malaza mpitahiry ny nentindrazana izay nitsikera an'i Boris Jokić, ilay mpiasam-panjakana teo aloha nisahana ny fanarahamaso ny fampiharana ireo fanavaozana ara-panabeazana. Miantso ireo mpanao hetsi-panoherana ho mpandrokidroky sy henatra, ary ireo fanavaozana ho fahavoazana, ireo mpikambana roa ao amin'ny Akademia Kroaty momba ny Siansa sy ny Kanto, ary niampanga an'i Jokić ho “te-hampianatra ireo ankizy hoe tsy misy Andriamanitra.”
Naneho hevitra ilay mpanao gazety, Bojan Stilin, hoe ohatra mazava aminà toetra mahatsiravina amin'ny adihevitra imasombahoaka mikasika ny resaka fanavaozana ara-panabeazana ny fitondrantenan'izy ireo. Raha tokony hiresaka ny fomba fanatsaràna ny fampianarana any Kroasia, “tsy miasa saina afa-tsy ny hanaparitaka fitsaràna lanjan-javatra fotsiny, izay mety hanàla baraka ireo izay tsy mitovy hevitra aminy, ireo mpanindrahindra ideolojia.”
16 ora izayBelarosia